Conspiró - Spanisch - Burmesisch Übersetzung und Beispiele
Sie suchten nach: conspiró (Spanisch - Burmesisch)
entonces salum hijo de jabes conspiró contra él, lo hirió en presencia del pueblo y lo mató; y reinó en su lugar
ယာဖက်သားရှလ္လုံသည် ဇာခရိမင်းတဘက်၌ သင်းဖွဲ့၍ လူများရှေ့မှာ သေအောင်လုပ်ကြံပြီးလျှင် သူ၏ အရာ၌ နန်းထိုင်၏။
y conspiró contra él su servidor zimri, jefe de la mitad de los carros. estando el rey en tirsa bebiendo hasta embriagarse en casa de arsa, administrador del palacio en tirsa
ရထားစီးသူရဲတဝက်ကိုအုပ်သောသူ၊ မိမိကျွန် ဇိမရိသည်သင်းဖွဲ့၍၊ ဧလာသည် တိရဇမြို့တွင် နန်းတော် အုပ်အာဇ၏ အိမ်၌ယစ်မူးအောင် သောက်လျက်နေစဉ် အခါ၊
así conspiró jehú hijo de josafat, hijo de nimsi, contra joram. joram había estado guardando ramot de galaad con todo israel, por causa de hazael, rey de siria
ထိုသို့နိမ်ရှိသားယောရှဖတ်၏ သားယေဟုသည် ယောရံမင်း တဘက်သင်းဖွဲ့လေ၏။ ထိုအခါ ရှုရိရှင်ဘုရင် ဟာဇေလကြောင့်၊ ယောရံမင်းနှင့် ဣသရေလလူ အပေါင်းတို့သည် ဂိလဒ်ပြည်ရာမုတ်မြို့ကို စောင့်ရှောက် ကြ၏။
ဣသခါအမျိုး၊ အဟိယသားဗာရှာသည် သင်းဖွဲ့၍၊ နာဒဒ်မင်းနှင့် ဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်း တို့သည် ဖိလိတ္တိပြည် ဂိဗေသုန်မြို့ကို ဝိုင်းထားကြစဉ်၊
contra él conspiró pécaj hijo de remalías, que era un comandante suyo;ehirióapecaías en samaria, en la ciudadela de la casa del rey, junto con argob y arié. con él iban cincuenta hombres de los hijos de galaad. le dio muerte y reinó en su lugar
အမှုတော်ထမ်းတပ်မှူး၊ ရေမလိသားပေကာသည် ပေကဟိမင်းတဘက်၌ သင်းဖွဲ့၍၊ အာဂေါဘနှင့် အရေဟအစရှိသော ဂိလဒ်ပြည်သား ငါးကျိပ်ပါလျက်၊ ရှမာရိမြို့၌နန်းတော်ထဲမှာ သေအောင်လုပ်ကြံ၍ သူ၏ အရာ၌ နန်းထိုင်၏။
mera kunem (Armenisch>Englisch)dydd y farn (Walisisch>Englisch)botànic (Katalanisch>Spanisch)if you dont understand my silence (Englisch>Hindi)palæarktiske zone (Dänisch>Deutsch)der (Deutsch>Baskisch)tribbing (Englisch>Portugiesisch)but nothing serious (Englisch>Hindi)Огън (Bulgarisch>Arabisch)azarbaijan (Swahili>Spanisch)与会者还强调了分享信息的重要性 (Chinesisch (Vereinfacht)>Englisch)benvenuta in siciliaebenvenuta anche helen (Italienisch>Englisch)tube light (Englisch>Telugu)bawang butil (Tagalog>Englisch)就是他鼓励我演电视 (Chinesisch (Vereinfacht)>Malaysisch)essay of santi or bikas (Englisch>Nepalesisch )moraki mou (Griechisch>Spanisch)belangrijke samenvatting (Holländisch>Französisch)menicare plus (Französisch>Englisch)verhütungsmethode (Deutsch>Rumänisch)kanayam (Tamilisch>Englisch)quien se lo manda (Spanisch>Englisch)मारवाड़ी सेक्सी (Indonesisch>Englisch)alb (Englisch>Dänisch)good morning beautiful women (Englisch>Maori)